I-Boeing kunye neAlaska Airlines zenza ukuhamba ngenqanawa kukhuseleke kwaye kuzinze
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-Boeing kunye neAlaska Airlines zenza ukuhamba ngenqanawa kukhuseleke kwaye kuzinze
I-Boeing kunye neAlaska Airlines iqabane kwiinkqubo ze-Boeing ecoDemonstrator zamva nje.
Amaphiko oPhuculo lweTekhnoloji kusapho lwama-737 MAX anciphisa ukusetyenziswa kunye nokukhutshwa kwepetroli
Iiapps ze-iPad ezibonelela ngemozulu yexesha lokwenyani kunye nolunye ulwazi kubaqhubi beenqwelo moya, ukuphucula ukusebenza kweoyile kunye nokunciphisa i-CO2 ukuphuma.
Inkqubo yekhamera kwi-777X entsha eya kuphucula ukhuseleko ngokunceda abaqhubi beenqwelomoya baphephe imiqobo emhlabeni
I-Boeing kunye neAlaska Airlines babhengeze namhlanje ukuba bayasebenzisana kwinkqubo ye-Boeing ecoDemonstrator yamva nje kwaye baya kuvavanya ubuchwephesha malunga neetekhnoloji ezingama-20 kwi-737-9 entsha yokuphucula ukhuseleko kunye nokuzinza kohambo lomoya.
Kwiindiza eziqala eli hlobo, iBoeing kwaye Iinqwelo-moya zaseAlaska Uza kuvavanya iarhente yokucima umlilo engena-halon engenciphisi mpembelelo kwi-ozone, ukuvavanya i-injini nacelle eyilelwe ukunciphisa ingxolo kunye nokuvavanya iindonga zecabin ezenziwe ngezinto ezirisayikilishwe, phakathi kwezinye iiprojekthi.
"Sinembali ende yokusebenza ne-Boeing ukuqhubela phambili itekhnoloji yeenqwelomoya, ukhuseleko kunye nokusebenza kakuhle kwepetroli," utshilo u-Diana Birkett Rakow, usekela-mongameli wee-Airlines zeAlaska, imicimbi yoluntu kunye nozinzo. “I-Alaska Airlines ibhabha iye kweyona mimandla mihle neyohlukeneyo ngokwendawo kwaye sizimisele ekufumaneni iindlela zokunciphisa iimpembelelo zemozulu kwinethiwekhi yethu. Lo msebenzi no-Boeing ukukhawulezisa ukuveliswa kwenkqubo ye-ecoDemonstrator isenza ukuba sikwazi ukufaka isandla kwikamva elizinzileyo loluntu lwethu lwehlabathi. ”
Ukusukela ngo-2012, inkqubo ye-ecoDemonstrator ikhawulezise into entsha ngokuthatha iitekhnoloji ezithembisayo ezingama-200 elabhoratri kwaye ibavavanye emoyeni ukujongana nemiceli mngeni kwishishini lokuhamba ngenqwelomoya kunye nokuphucula amava abakhweli.
"IBoeing izimisele ukuqhubeka nokuphucula ukhuseleko lomoya kunye nokusebenza kweemveliso zethu," utshilo uStan Deal, umongameli we-Boeing Commercial Airplanes kunye ne-CEO. "Siyazingca ngokusebenzisana nabathengi bedolophu yethu kunye namanye amaqabane kwihlabathi liphela kulo nyaka ukwenza ukuhamba ngenqwelo-moya kuzinze."
Kwiinyanga ezintlanu zovavanyo lwenqwelomoya lwe-ecoDemonstrator, iBoeing kunye neAlaska bazakusebenza namanye amaqabane alithoba ukuvavanya itekhnoloji entsha. Emva kokuba iimvavanyo zigqityiwe, inqwelomoya iya kuqwalaselwa ukulungiselela inkonzo yabakhweli kwaye ihanjiswe eAlaska.
IVolaris: i-117% yomthamo we-2019 kunye ne-88% yomthwalo ngoMeyi 2021
I-United Airlines ithenge iijets ezili-15 ezivela kwiBoom Supersonic